बायोडीजेल ट्रान्ससेरिफेरेशनको आधार-उत्प्रेरकको प्रयोग गरेर संश्लेषित गरिएको छ। यद्यपि, कच्चा माल जस्तै कम-ग्रेडको फोहोर एसिड सामग्रीको साथ सब्जी प्रयोग गरिन्छ भने एक एसिड-क्याटलाइस्टको प्रयोगबाट एस्टरिफिकेशनको रासायनिक पूर्व-उपचार चरण आवश्यक हुन्छ। अल्ट्रासोनिकेसन र यसको सोनोकेमिकल र सोनोमेकेनिकल प्रभावले दुबै प्रतिक्रिया प्रकारहरूमा योगदान पुर्‍याउँछ र बायोडिजल रूपान्तरणको क्षमता नाटकीय रूपमा बढाउँदछ। अल्ट्रासोनिक बायोडिजेल उत्पादन पारम्परिक बायोडिजेल संश्लेषणको तुलनामा निकै छिटो हुन्छ, यसको परिणामस्वरूप उच्च बायोडिजेल उत्पादन र गुणस्तर हुन्छ र मिथेनोल र उत्प्रेरक जस्ता अभिकर्मकहरू बचाउँछ।
पावर अल्ट्रासाउन्ड प्रयोग बायोडीजेल रूपान्तरण
बायोडिजेलका लागि, फ्याटिड एसिड एस्टर वनस्पति तेलको टे्रन्सेसिफेरेशनका साथसाथै पशुहरूको बोसो (जस्तै, टेलो) द्वारा उत्पादन गरिन्छ। ट्रान्सेसिफेरेशन प्रतिक्रियाको दौरान, ग्लाइसरोल घटक अर्को रक्सीले बदलिन्छ, जस्तै मेथनल। फिड फ्याक्स एसिडहरूको उच्च सामग्री सहित फिडस्टकहरू, उदाहरणका लागि फोहोर तेल (डब्ल्यूभीओ), साबुन गठनबाट बच्न आदेशमा एसिड एस्टरिफिकेशनको प्रि-उपचार आवश्यक पर्दछ। यो एसिड क्याटालिसिस प्रक्रिया एक धेरै ढिलो प्रतिक्रिया हो, जब पारंपरिक ब्याच विधिको रूपमा गरिन्छ। ढिलो एस्टरिफिकेशन प्रक्रियाको गतिको लागि समाधान भनेको पावर अल्ट्रासाउन्डको अनुप्रयोग हो। Sonication प्रतिक्रिया गति, रूपान्तरण र बायोडिजेल उत्पादन मा एक महत्वपूर्ण सुधार हासिल गर्दछ को रूप मा उच्च शक्ति अल्ट्रासाउन्ड को Sonochemical प्रभाव को बढ़ावा र एसिड उत्प्रेरक गहन। अल्ट्रासोनिक काभेटेशनले सोनोमेकेनिकल शक्तिहरू प्रदान गर्दछ, जस्तै उच्च-शियर मिक्सिंग, साथ साथै सोनोकेमिकल ऊर्जा। यी दुबै प्रकारको अल्ट्रासोनिक प्रभाव (सोनोमेकेनिकल र सोनोकेमिकल) एसिड-उत्प्रेरित एस्टेरिफिकेशनलाई द्रुत प्रतिक्रियामा परिणत गर्दछ जुन कम उत्प्रेरकको आवश्यक छ।
अल्ट्रासोनिक मिश्रणले बायोडिजल रूपान्तरण दरमा सुधार ल्याउँछ, उत्पादन बढाउँदछ र अधिक मेथनॉल र उत्प्रेरकको बचत गर्दछ। चित्रले 3x को स्थापना देखाउँदछ। UIP1000hdT (प्रत्येक १kW अल्ट्रासाउंड पावर) इनलाइन प्रोसेसिंगको लागि।
बायोडिजेल (एफएएमए) मा ट्राइग्लिसराइड्सको ट्रान्ससिटरिफिकेशनले सोनिकेशनको प्रयोग गर्दा छिटो प्रतिक्रिया र महत्वपूर्ण उच्च दक्षताको परिणाम दिन्छ।
कसरी अल्ट्रासोनिक बायोडीजेल रूपान्तरण काम गर्दछ?
ट्रान्ससेस्टरिफिकेशन (कहिलेकाँही अल्कोलिसिस पनि भनिन्छ) र एस्टरिफिकेशन बिभिन्न चरणहरूका बिच अल्ट्रासोनिकेसन मिक्सनको बृद्धिका साथै वृद्धि गर्मी र मास ट्रान्सफरमा आधारित छ। अल्ट्रासोनिक मिक्सिंग ध्वनिक गुहिकासनको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ, जुन तरलमा भ्याकुम बबलहरू इनपुट हुने परिणामको रूपमा देखा पर्दछ। ध्वनी cavitation उच्च कतरनी शक्ति र turbulences, साथ साथै धेरै उच्च दबाव र तापमान भिन्नता द्वारा विशेषता छ। यी शक्तिहरूले transesterization / एस्टरिफिकेशनको रासायनिक प्रतिक्रियालाई बढावा दिन्छन् र द्रव्यमान र तातो स्थानान्तरण तीव्र गर्दछ, यसैले बायोडिजेल रूपान्तरणको प्रतिक्रियालाई उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्दछ।
बायोडीजेल रूपान्तरणको क्रममा अल्ट्रासोनिक्सको प्रयोग प्रक्रिया दक्षता सुधार गर्न वैज्ञानिक र औद्योगिक रूपमा प्रमाणित गरिएको छ। प्रक्रिया दक्षता मा सुधार को लागी ऊर्जा खपत र अपरेटिंग लागतहरु लाई कम गर्न को लागी श्रेय दिन सकिन्छ, र रक्सीको कम प्रयोग (जस्तै, मेथनॉल), कम उत्प्रेरक, र उल्लेखनीय छोटो प्रतिक्रिया समय। बाहिरी तातो को लागी कुनै आवश्यकता छैन किनभने तापन को लागि ऊर्जा लागत को हटाईन्छ। थप रूपमा, बायोडिजेल र ग्लाइसेरोल बीच चरण विभाजन छोटो चरण विभाजन समयको साथ सरल छ। बायोडिजेल उत्पादनमा अल्ट्रासाउन्डको व्यावसायिक प्रयोगको लागि महत्त्वपूर्ण कारक कुनै पनि भोल्युमको सरल स्केल अप, विश्वसनीय र सुरक्षित अपरेशनको साथ साथ अल्ट्रासोनिक उपकरणको मजबुतता र विश्वसनीयता (औद्योगिक मानक, लगातार २ run / / / लगातार चलाउन सक्षम छ)5365 पूर्ण लोड अन्तर्गत)।
इनलाइन बायोडिजेल एस्टेरीफिकेशन र ट्रान्ससेस्टरिफिकेशनको लागि फ्लो सेलको साथ अल्ट्रासोनिक औद्योगिक प्रणाली।
अल्ट्रासोनिक एस्टेरीफिकेशन र transesterication ब्याच या निरन्तर इनलाइन प्रक्रिया को रूप मा चलाउन सकिन्छ। चार्टले बायोडिजेल (FAME) transesterifications का लागि अल्ट्रासोनिक इनलाइन प्रक्रिया देखाउँदछ।
अल्ट्रासोनिक एस्टेरीफिकेशन र transesterication ब्याच या निरन्तर इनलाइन प्रक्रिया को रूप मा चलाउन सकिन्छ। यस चार्टले बायोडीजेल रूपान्तरणको लागि अल्ट्रासोनिक ब्याच प्रक्रिया देखाउँदछ।
अल्ट्रासोनिक सहायताले दुई चरण बायोडिजेल रूपान्तरण लागू गर्दै एसिड- र बेस-क्याटलाइज्ड प्रतिक्रिया चरणहरू
उच्च एफएफए सामग्रीको साथ फिडस्टकहरूको लागि, बायोडिजेल उत्पादन दुई चरण प्रक्रियामा एसिड वा बेस-उत्प्रेरक प्रतिक्रियाको रूपमा गरिन्छ। अल्ट्रासाउन्डले दुई प्रकारका प्रतिक्रियाहरू योगदान गर्दछ, एसिड-उत्प्रेरित एस्टेरिफिकेशन साथै बेस-उत्प्रेरित ट्रान्ससेरीफेरेशन:
अल्ट्रासाउन्ड प्रयोग गरी एसिड-उत्प्रेरक एस्टेरिफिकेशन
फिडस्टकमा निःशुल्क फ्याटी एसिडहरूको अधिक उपचार गर्न, एस्टरिफिकेशनको प्रक्रिया आवश्यक छ। सल्फ्यूरिक एसिड सामान्यतया एसिड उत्प्रेरकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
फिल्टरिंग र दूषित पदार्थ र पानीबाट परिष्कृत गरेर फिडस्टक तैयार गर्नुहोस्।
उत्प्रेरकलाई सल्फ्यूरिक एसिड मीथेनोलमा विघटन गर्नुहोस्। उत्प्रेरक / मेथनॉलको फिड स्ट्रिम र एक हीट एक्सचेन्जर मार्फत फिडस्टक र एक स्थिर मिक्सर एक कच्चा पूर्व मिक्स प्राप्त गर्न।
उत्प्रेरक र फिडस्टकको प्रि-मिक्स सिधा अल्ट्रासोनिक प्रतिक्रिया कक्षमा जान्छ, जहाँ अल्ट्रा-फाइन मिक्सि son र सोनोकेमिस्ट्रीले प्रभाव पार्छ र नि: शुल्क फ्याट्टी एसिडहरूलाई बायोडिजेलमा रूपान्तरण गरिन्छ।
अन्तमा, उत्पादनलाई पानीबाट निकाल्नुहोस् र दुई दोस्रो चरणमा फिड गर्नुहोस् - अल्ट्रासोनिक ट्रान्सेसिरेसन। अम्लीय भिजेको मेथनॉल पुन: प्राप्ति पछि, सुख्खा र न्युट्रलाइजेशन पुन: प्रयोगको लागि तयार छ।
धेरै उच्च एफएफए फिडस्टकहरू सहितको लागि, रिकर्सुलेसन सेटअपले ट्रान्सेसिरेसन चरण भन्दा पहिले उचित स्तरमा एफएफए कम गर्न आवश्यक पर्दछ।
एसिड उत्प्रेरकको प्रयोग गरेर एस्टेरिफिकेशन प्रतिक्रिया:
एफएफए + रक्सी - एस्टर + पानी
बेस-क्याटालाइज्ड ट्रान्सेस्टरिफिकेशन अल्ट्रासाउन्ड प्रयोग गर्दै
फिडस्टक, जो अब केवल थोरै मात्रामा एफएफए गर्दछ, सीधा transesterization चरणमा खुवाउन सकिन्छ। प्राय जसो सोडियम हाइड्रोक्साइड वा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड (NaOH, KOH) बेस उत्प्रेरकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
उत्प्रेरक अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइडलाई मिथेनोलमा विघटन गर्नुहोस् र क्र्याट प्रि-मिक्स प्राप्त गर्न स्थिर मिक्सरको माध्यमबाट उत्प्रेरक / मेथनॉल र प्रीट्रेटेड फिडस्टकको प्रवाहहरू।
प्रि-मिक्स सिधा अल्ट्रासोनिक प्रतिक्रिया कक्षमा cavitational उच्च शीयर मिक्सन र सोनोकेमिकल उपचारको लागि खुवाउनुहोस्। यस प्रतिक्रियाको उत्पादनहरू एल्किल एस्टरहरू (अर्थात् बायोडिजेल) र ग्लिसरीन हुन्। ग्लिसरीनलाई सेटलि-आउट वा सेन्ट्रिफिंग द्वारा अलग गर्न सकिन्छ।
अल्ट्रासोनिक रूपमा उत्पादित बायोडिजेल उच्च गुणको छ र मेथनोल र उत्प्रेरकको बचत गरेर छिटो, उर्जा-कुशल र लागत-कुशल उत्पादन गर्दछ।
एक आधार उत्प्रेरक को उपयोग Transesterication प्रतिक्रिया:
तेल / फ्याट + मदिरा → बायोडिजेल + ग्लिसरॉल
मीथेनोल प्रयोग & मीथेनोल पुन: प्राप्ति
बायो डीजल उत्पादनको बखत मेथेनोल एक प्रमुख घटक हो। अल्ट्रासोनिक रूपमा चालित बायोडिजेल रूपान्तरणले मेथनोलको उल्लेखनीय कम प्रयोगको लागि अनुमति दिन्छ। यदि तपाइँ अब सोच्दै हुनुहुन्छ "मलाई मेरो मेथनल प्रयोगको बारेमा परवाह छैन, किनकि म यसलाई जे भए पनि पुन: प्राप्ति गर्छु", तपाई पुन: सोच्न सक्नुहुन्छ र वाष्पीकरण चरणको लागि लागू हुने अत्यधिक उच्च उर्जा लागत (जस्तै: आसवन स्तम्भ प्रयोग गरेर) लाई विचार गर्न सक्नुहुन्छ, जुन मिथेनोललाई छुट्ट्याउन र रिसायकल गर्न आवश्यक छ।
बायोडिजल र ग्लिसरीनलाई दुई तहमा अलग गरिसकेपछि मीथेनल सामान्यतया हटाइन्छ, प्रतिक्रिया उल्टाउनबाट रोक्दछ। त्यसपछि मेथनल सफा गरी प्रक्रियाको सुरूमा पुन: पुन: साइकल गरिन्छ। अल्ट्रासोनिक-संचालित एस्टेरिफिकेशन र ट्रान्ससेस्टरिफिकेसन मार्फत बायोडिजेल उत्पादन गर्दै, तपाईं आफ्नो मेथनॉल प्रयोग नाटकीय रूपमा घटाउन सक्षम हुनुहुन्छ, यसैले मेथेनल रिकभरीको लागि अत्यधिक उच्च ऊर्जा खर्च घटाउने। हिल्सचर अल्ट्रासोनिक रिएक्टरहरूको प्रयोगले आवश्यक मात्रा अधिक मेथेनोल excess०% सम्म घटाउँछ। १: or वा १: between. between (तेल: मेथनॉल) को बीच दाई अनुपात धेरै फिडस्टकको लागि पर्याप्त छ, जब हिल्सचर अल्ट्रासोनिक मिक्सि using प्रयोग गर्दा।
अल्ट्रासोनिक एस्टरिफिकेशन एक pretreatment चरण हो, जसले एफएफएमा कम ग्रेड फिडस्टक उच्च एस्टरमा घटाउँछ। अल्ट्रासोनिक ट्रान्सेसिरीकरणको दोस्रो चरणमा, ट्राइग्लिसराइड्स बायोडिजेल (एफएएमए) मा रूपान्तरण गरियो।
अल्ट्रासोनिक वृद्धि भएको बायोडीजेल रूपान्तरण दक्षता – वैज्ञानिक रुपमा प्रमाणित
असंख्य अन्वेषक समूहले बायोडिजलको अल्ट्रासोनिक ट्रान्सेसिरीकरणको संयन्त्र र प्रभावहरूको अनुसन्धान गरेका छन्। उदाहरण को लागी, Sebayan डार्विन को अनुसन्धान टोलीले देखाए कि अल्ट्रासोनिक cavation रासायनिक गतिविधि र प्रतिक्रिया दर वृद्धि भयो र परिणामस्वरूप एक ठूलो वृद्धि एस्टर गठन। अल्ट्रासोनिक टेकनीकले transesterication प्रतिक्रिया समय minutes मिनेटमा कम गर्‍यो – मेकानिकल स्ट्रि stir प्रोसेसिंगको २ घण्टाको तुलनामा। अल्ट्रासोनिकेसन अन्तर्गत ट्राइग्लिसराइड (टीजी) को फेममा रूपान्तरणले .6 .6 ..69२ w% डब्ल्यूटी लाई मिथेनलको तेल दाल अनुपात:: १ र १% डब्ल्यू सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरकको रूपमा प्राप्त गर्‍यो। (सीएफ। डार्विन एट अल २०१०)
बायोडीजेल प्रोसेसिंगको लागि मध्यम आकार र ठूलो-स्केल अल्ट्रासोनिकेटरहरू
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स’ कुनै पनि भोल्युममा बायोडिजेलको दक्ष उत्पादनको लागि सानोदेखि मध्यम आकारको साथै ठूला औद्योगिक इन्टरनेट अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरू आपूर्ति गर्दछ। कुनै पनि स्तरमा अल्ट्रासोनिक प्रणाली प्रस्ताव गर्दै, हिल्सचरले साना उत्पादकहरू र ठूला कम्पनीहरूका लागि आदर्श समाधान प्रस्ताव गर्न सक्दछ। अल्ट्रासोनिक बायोडीजेल रूपान्तरण ब्याचको रूपमा वा निरन्तर इनलाइन प्रक्रियाको रूपमा चलाउन सकिन्छ। स्थापना र अपरेशन सरल, सुरक्षित छ र उच्च बायोडिजेल गुणवत्ताको विश्वसनीय रूपमा उच्च आउटपुट दिन्छ।
तल तपाईंले सिफारिस गरिएको र्याक्टर सेटअपहरू पाउनुहुनेछ उत्पादन दरहरूको दायराका लागि।
टन / घण्टा
0.25 देखि 0.5
80 देखि 160
0.5 देखि 1.0
160 देखि 320
0.75 देखि 1.5
240 देखि 480
1.0 देखि 2.0
320 देखि 640
1.5 देखि 3.0
480 देखि960
3.0 देखि 6.0
9 60 देखि 1920 सम्म
4.5 देखि 9.0
1440 देखि 2880
बायोडीजेल उत्पादन हुन्छ जब ट्राइगिसराइड्स ट्रान्सेस्टरिफिकेशन भनेर चिनिने रासायनिक प्रतिक्रिया मार्फत नि: शुल्क फ्याथी मिथाइल एस्टर (एफएएमए) मा रूपान्तरण गरिन्छ। ट्रान्ससेरिफिकेसनको प्रतिक्रियाको क्रममा, वनस्पति तेल वा जनावरहरूको बोसोमा ट्राइग्लिसराइडहरूले उत्प्रेरकको उपस्थितिमा प्रतिक्रिया दिन्छ (जस्तै, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वा सोडियम हाइड्रोक्साइड) प्राथमिक मदिरा (जस्तै, मेथनॉल) सँग। यस प्रतिक्रियामा, एल्किल एस्टर वनस्पति तेल वा जनावरहरूको बोसोको फिडस्टकबाट बनिएको हो। ट्राइग्लिसेराइड्स ग्लिसराइड्स हो, जसमा ग्लाइसरोल लामा चेन एसिडको साथ एसिफाइन्ड हुन्छ, जसलाई फ्याटी एसिड भनिन्छ। यी फ्याटी एसिड प्रशस्त मात्रामा वनस्पति तेल र पशु बोसोमा उपस्थित छन्। किनकि बायोडिजेल बिभिन्न फिडस्टकबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ जस्तै कुंवारी वनस्पति तेल, फोहोर वनस्पति तेल, प्रयोग गरिएको फ्राइंग तेल, पशु वसा जस्तो टल्लो र चाउको बच्चा, फ्री फ्याटी एसिड (एफएफए) को मात्रा धेरै फरक हुन सक्छ। ट्राइग्लिसेराइड्सको निःशुल्क फ्याटी एसिडको प्रतिशत एक महत्त्वपूर्ण कारक हो जसले बायोडिजल उत्पादन प्रक्रिया र परिणामस्वरूप बायोडिजेल गुणलाई अत्यन्तै प्रभाव पार्दछ। नि: शुल्क फ्याट्टी एसिडहरूको एक उच्च मात्राले रूपान्तरण प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न र अन्तिम बायोडिजेल गुण बिगार्न सक्छ। मुख्य समस्या यो हो कि निःशुल्क फ्याटी एसिड (एफएफए) क्षार उत्प्रेरकसँग प्रतिक्रिया गर्दछ जसले साबुनको गठनको परिणाम दिन्छ। साबुन गठन पछि glycerol अलग समस्या पैदा गर्दछ। त्यसकारण, एफएफएको उच्च मात्रा भएको फिडस्टकहरूमा प्राय: प्रिन्ट्रीमेन्ट (एक तथाकथित एस्टरिफिकेशन प्रतिक्रिया) आवाश्यक हुन्छ, जुन एफएफएहरू एस्टरमा परिणत हुन्छन्। Ultrasonication दुबै प्रतिक्रियाहरु, transesterization र एस्टरिफिकेशन को बढ़ावा दिन्छ।
निर्धारणको रासायनिक प्रतिक्रिया
एस्टरिफिकेसन एक जैविक एसिड (आरसीओओएच) लाई मदिरा (आरओएच) सँग मिसाउने प्रक्रिया एस्टर (आरसीओओआर) र पानी बनाउनको लागि हो।
एसिडिक निर्धारणमा मेथनोल प्रयोग
जब एसिड एस्टरिफिकेशन फिडस्टकमा एफएफएहरू कम गर्न प्रयोग गरिन्छ, तत्काल ऊर्जा आवश्यकताहरू अपेक्षाकृत कम हुन्छन्। जे होस्, पानी एस्टरिफिकेशन प्रतिक्रियाको समयमा सिर्जना हुन्छ – भिजेको, अम्लीय मिथेनोल सिर्जना गर्दै, जुन तटस्थ, सुक्खा र पुनःप्राप्ति हुनुपर्दछ। यो मेथनोल पुन: प्राप्ति प्रक्रिया महँगो छ।
यदि सुरु फिडस्टकसँग २० देखि %०% वा एफएफएको उच्च प्रतिशत छ भने, स्वीकार्य स्तरहरूमा तल ल्याउन बहु चरणहरू आवश्यक पर्दछ। यसको मतलब, अझ बढी अम्लीय, भिजेको मेथनोल सिर्जना गरिएको छ। अम्लीय मेथनॉललाई बेअसर गरे पछि, सुकाउन महत्वपूर्ण रिफ्लक्स दरहरूको साथ मल्टिस्टेज डिस्टिलेसनको आवश्यक पर्दछ, परिणामस्वरूप धेरै उच्च ऊर्जा प्रयोग हुन्छ।